Ukuqonda ukuba kutheni kwaye okuphakathi ... | Martech Zone
Ukuqonda ukuba kutheni kwaye okuphakathi…
NgoLwesithathu, uDisemba 5, 2007 NgoLwesine, uJuni 11, 2009 Douglas Karr
Ngoku ka Dictionary.com:
Phakathi: yenye yeendlela okanye amajelo onxibelelwano ngokubanzi, ulwazi, okanye ukuzonwabisa eluntwini, njengamaphephandaba, unomathotholo, okanye umabonwakude.
Mhlawumbi owona msebenzi unzima kuyo nayiphi na isoftware njengenkonzo kukoyisa iiparadigms zeshishini olikhonzayo. Ndiza kuthetha ngokuthe ngqo kumzi mveliso wevenkile yokutyela kulo mzekelo, kodwa kuyafana nayo nayiphi na enye inkampani ye-ecommerce… ukuqonda ukuba abathengi bakho benza ntoni kwi-intanethi kunye nevenkile yakho, kwifowuni yakho, okanye ukudibana nabasebenzi bakho kuya kukunceda Yila ujongano oluchanekileyo lokunyusa umgangatho kubathengi abaninzi.
Ngomzi mveliso wokutyela, mhlawumbi eyona paradigm inzima kukuba uku-odolwa kwi-Intanethi kufuneka kubonakalise ukhetho ngaphakathi kweresityu. Ayisiyonyani kwaphela. Yindlela eyahlukileyo. Ukuchaza oku kubathengisi kunokuba nzima ukubandakanyeka. Balazi ngcono ishishini labo kunaye nabani na, kodwa abayazi kwi-intanethi.
Iindawo zokutyela lishishini elinomdla… ukutya, iiyunifomu zabasebenzi, uyilo lendawo yokutyela… zonke iinkcukacha zinika igalelo kumava ngokubanzi. Ukukhutshwa okanye ukuhanjiswa akunakuthelekiswa namava ngaphakathi kwivenkile yokutyela, kodwa banokukukhumbuza ngayo. Uku-odola kwi-Intanethi akulingani nenye ukutya + okulula. Uncedo lokuthabatha okanye lokuzisa, ukulungela ukutya ekhayeni lakho, ukulungela ukuhlawulwa kwekhadi letyala… nokuba kulula ukungathethi nomntu ovela kwivenkile yokutyela.
Ukuba indawo yokutyela isebenza ukwenza ubukho babo kwi-intanethi bube nzima njengeminikelo yabo yangaphakathi, zinokuba nefuthe kwayona njongo ngoba umsebenzisi wangena kwi-intanethi kwindawo yokuqala. Abathengi bethu be-Intanethi yoku-odola ngokobungakanani kunye necuisine, kodwa uninzi yindawo yokutya eqhelekileyo (hayi ukutya okukhawulezayo, hayi inkwenkwezi ezi-5). Kuya kubonakala ukuba abathengi bethu abonwabileyo ngabo banikezela ngeendlela ezimbalwa.
Ukubeka ipleyiti yesidlo sangokuhlwa ngeendlela ezi-4 ezinyanzelekileyo, ezinye iindlela ezili-10, kunye nezinye izinto ezinokuthi zithathe indawo ezinokuthi zibonakalise ukhetho kwindawo yokutyela - kodwa ngaba umsebenzisi wakho uza kubambelela ukuze ayiqonde? Andicingi. Endaweni yoko-nikeza ukhetho lweepleyiti zakho ezaziwayo, kwaye ubone ukuba kwenzeka ntoni emva koko.
I-Intanethi iphakathi. Ngalo naluphi na uhlobo, kufuneka uqaphele isimilo esisemva kokusebenzisa eso sixhobo. Ukuqonda oko kuziphatha kunye nokusebenzisa loo ndlela kuya kuqhuba impumelelo.
tags: Iarhente yokuthengisa nge-imeyileUmcebisi ngeNtengiso nge-imeyileamarhe e-intanethiUlawulo lweNtengiso ye-imeyileItekhnoloji yentengisoIwebhusayithi entshaUkuthengisa nge-imeyile ngobuchuleezentlaloUmxhasiiteknoloji iya kubulala
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2007 ngo-8: 31 PM
Uluvo olunomdla kwaye ndicinga ukuba unyanisile.
Ndinendawo yokutyela yasekhaya ebonelela ngokutya kwaye ususe. Ndingabakhala okanye ndibathumelele i-imeyile ukubhukisha noku-odola ukutya. Ndingatya xa ndifuna 'ukuphuma ebusuku'. Ndiza kuthatha xa ndifuna 'ubusuku obulula'. Ndiza kubathumela imeyile xa ndiceba ipati okanye omnye umsitho. Andiyi kuthi, umzekelo, ndibathumelele i-imeyile ukubhukisha itafile- zininzi izinto eziguquguqukayo kwaye kulula kakhulu ukufowuna. Kwaye kwicala leflip, kulula kakhulu uku-odola ukutya kwiintsuku ezintlanu nge-imeyile.